Ogaden News Agency (ONA) – Ra’iisul-Wasaaraha Falastiin oo Qarax Lala Beegsaday Ka Badbaaday.
Ra’iisul-Wasaaraha Falastiin oo Qarax Lala Beegsaday Ka Badbaaday.
Rami Hamdallah, Ra’iisul-wasaaraha Falastiin ayaa ka badbaaday qarax lala beegsaday, kolonyo uu la socday oo booqasho ku tagay deegaanka Marinka Gaza.
Qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay meel aan ka fogeyn isbaarada ay dadka ku baadhaan ciidamada Israel ee go’doonka ku haya marinka Gaza. Waxaa qaraxa ku dhaawacmay 7 kamid ah illaalada Raysal-wasaaraha oo aan isagu wax dhaawac ah soo gaadhin, waxaa sidoo kale wafdigan kamid ahaa Madaxa sirdoonka Falastin, Majed Faraj.
Ururka Xamaas ee ka taliyaha Marinka Gaza ayaa sheegay inuu baadhitaan ku samaynayo, wuxuuna u saaray guddi uu hogaaminayo madaxa amniga Gaza, Tawfiq Abu Naim. Xubno ka tirsan Xamaas ayaa sheegay in weerarkan ay ku lugleedahay Israel oo dooneysa in ay markale iska horkeento labada xisbi ee Falastiin Xamaas iyo Fatax oo sanadkii hore wada gaadhay heshiis.
Ururada Xamaas iyo Fatax oo ka kala taliya Gaza iyo Ramallah ayaa bishii Oktoober ee sanadkii hore magaalada Qaahira ee dalka Masar ku saxiixday heshiis ay kusoo afjarayaan khilaafkooda, iyagoo ku heshiiyey in ay wadashaqeeyaan, inkastoo dhaqan galinta heshiiskaasi uu dib u dhac ku yimid.